Ny fizahan-tany Bermuda dia nomena anarana ho mpizahatany ofisialy ofisialin'ny Tompondakan'ny Tenisy Open US
Home » Lahatsoratra farany farany » Sports » Ny fizahan-tany Bermuda dia nomena anarana ho mpizahatany ofisialy ofisialin'ny Tompondakan'ny Tenisy Open US
Vaovao Mafana Bermuda • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Sports • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Enga anie 2, 2019
Ny Manam-pahefana fizahan-tany Bermuda, fikambanana marketing ofisialy ofisialy ho an'ny nosy, ary ny Fikambanan'ny Tenisy amerikana (USTA), dia nanambara fa i Bermuda no ho mpiara-miombon'antoka fizahan-tany amin'ny fiadiana ny tompondakan'i Etazonia Open Tennis Open.
Ny fiaraha-miasa dia manomboka amin'ny US US Open amin'ity fahavaratra ity any New York City, izay tsena loharano lehibe any Bermudes ho an'ny mpitsidika, ary io nosy io dia sidina 2019 minitra monja avy any New York. Bermuda dia hanana fanatrehana lehibe amin'ny US Open miaraka amin'ny takelaka eo an-kianja ao amin'ny kianja Arthur Ashe, fisian'ireo fananana nomerika amerikana Open, fantsona media sosialy ary toerana fampiatoana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan'ny mpanjifa. Ny Manam-pahefana fizahan-tany any Bermuda dia miara-miasa amin'ny USTA, USTA Player Development ary ny USTA Foundation hamorona hetsika vaovao marobe misy tanterahina any Bermuda amin'ny taona 90. Ity hetsika ity dia hanasongadinana Pro-Am ary koa fampirantiana miaraka amin'ireo angano tenisy ary mpilalao amerikana misandratra.
Ny tombony manokana amin'ny fiaraha-miasa dia:
• Hisy fampirantiana marobe mandritra ny ora maherin'ny 100 ora amin'ny takelaka mivantana isaky ny firenena mpampinono sakafo ambony any Bermudes - Etazonia, Kanada ary Angletera - ankoatry ny firenena 100 hafa ny tsangambaton'ny fitsarana.
• Mandritra ny US Open Fan Week sy ny fifaninanana roa herinandro, ny toerana fampiatoana eo an-toerana ao amin'ny USTA Billie Jean King National Tennis Center dia ahafahan'ny mpankafy maherin'ny 800,000 mifanaraka amin'ny tanjon'ny mpitsidika an'i Bermuda, 56% amin'izy ireo dia avy amin'ny tsenan'ny metro New York.
• Ny hetsika marolafy misy ao Bermudes amin'ny taona 2020 dia hitondra fandaniam-bola fanampiny ho an'ny mpitsidika sy fampahalalam-baovao ho an'i Bermuda ho toeram-pialan-tsasatra sy fanatanjahan-tena voalohany.
Ny tenisy dia manana fakany tantara manan-tantara ao Bermuda. Nomarihan'ny Hall of Fame Iraisampirenena Iraisampirenena ho toy ny "Renin'ny Tenisy Amerikanina", Mary Ewing Outerbridge (teraka tany Amerika ho an'ny ray aman-dreny Bermudianina) no nahita voalohany ny lalao rehefa nitsidika ny tranon'ny fianakaviany tao amin'ilay nosy izy tamin'ny 1874, nianatra tenisy avy amin'ireo manamboninahitra britanika napetraka any Bermuda. Nentiny niverina tany New York ny fitaovana tenisy taty aoriana, nampahafantatra ilay fanatanjahantena tao amin'ny faribenany Staten Island.
"Ny fiaraha-miombon'antoka fizahan-tany manokana miaraka amin'ny US Open dia miasa ho an'i Bermuda amin'ny ambaratonga maro ary manampy amin'ny fisarahana amin'ny fifaninanana misy anay," hoy i Kevin Dallas, CEO an'ny Bermuda Tourism Authority. “Ny tantaran'ny marika Bermuda nampiditra ny fanatanjahan-tena tenisy tany Etazonia dia ohatra iray fotsiny amin'ny fomba fanondrahana tototra ny lanjanay amin'ny maha-Nosy kely antsika eo afovoan'ny Atlantika. Ny fiaraha-miasa ihany koa dia mametraka an'i Bermuda amin'ny resaka ara-kolontsaina amin'ny iray amin'ireo hetsika tsy maintsy jerena ao New York City. Rehefa hifarana ny fahavaratra ao an-tanàna, hampiasainay ity sehatra ity hanasana ny New Yorkers hanitatra ny fotoam-pahavaratra misy azy ireo miaraka amin'ny hetsika mavitrika eto Bermuda, "hoy i Dallas nanampy. “Ny fampidirana hetsika manokana hatao any Bermudes izay hamorona fandaniana mivantana ary hanomezana toeram-pitsaboana ankizy hampivelatra sy hampiharihary ny fahatanoran'ny tanora Bermuda amin'ny fahalalahana amin'ny tenisy sy ny fahafaha-manao dia manintona ny mofomamy.”
"Ny manam-pahefana fizahan-tany any Bermuda dia manolotra ny nosy ho an'ny mpandeha zana-borona vaovao izay mifanitsy tanteraka amin'ny tohan'ny mpankafy US Open isam-paritra, nasionaly ary manerantany," hoy i Gordon Smith, Lehiben'ny Executive Executive ary Directeur Executive, USTA. “Manantena izahay fa hanampy amin'ny fampitomboana ny fampahafantarana an'i Bermudes ho toerana fitetezam-paritany miavaka amin'ny alàlan'ity fiaraha-miasa vaovao ity.”
Ny US Open 2019 dia natao ny 26 aogositra ka hatramin'ny 8 septambra tao amin'ny USTA Billie Jean King National Tennis Center ao Flushing, NY Fanovana stratejika naharitra dimy taona $ 600 tapitrisa no natokana ho an'ny mpitsidika sy ny mpiara-miombon'antoka bebe kokoa noho ny teo aloha. . Ny toerana dia niarahaba mpandray anjara 828,798 tamin'ny taona 2018 nandritra ny hetsika.
Swoop dia nandefa sidina vaovao mankany Palm Springs avy any...
Vondrona Fraport: Niakatra be ny vola miditra sy ny tombom-barotra...
Mpiasa iray maty, telo naiditra hopitaly tany Espaina…
Mitadiava vola amin'ny fijerena horonan-tsary miaraka amin'ity fampiharana ity